Abavelisi beNkqubo eBhiya eKhanyayo | KwiChina Inkqubo yoBhiya eKhanyayo kunye nabaXhasi
Igama lemveliso: 5000L nkqo Bright Beer Tank BBT, Bright Beer Tanks, cylindrical koxinzelelo tanki, ukukhonza iitanki, ibhiya wokugqibela imeko itanki, ibhiya yokugcina iitanki - la ngamagama aqhelekileyo, kubandakanya iklasi enye yeenqanawa zoxinzelelo ezizodwa ezilungiselelwe ukulungiswa kwekhabhoni ibhiya ngaphambi kokufakwa kwibhotile yayo, ukugcwalisa ii-kegs okanye ezinye izikhongozeli. Ibhiya ecociweyo ecociweyo ityhilwa kwiitanki zebhiya okanye iitanki zesilinda ezixineneyo zokugcina itanki yoxinzelelo phantsi koxinzelelo ...
Igama lemveliso: Tank Ethe tye yeBhiya ethe tyaba ethe tye, ekwabizwa ngokuba ziitanki zenkonzo, iitanki zesiselo esigqityiweyo, okanye iitanki zebhiya eziqaqambileyo zeBTT. Iitanki ezisebenzayo kunye nokufakwa kwe-PUR zipholile zisebenzisa amanzi okanye i-glycol ejikeleza ngaphakathi kwiiduplicators (amajelo okupholisa ngaphakathi kwebhatyi yentsimbi ephindiweyo). Iitanki eziqaqambileyo kufuneka zilungiselelwe ukuba zibande kwaye zibambe uxinzelelo, ngamanye amaxesha zisebenze njenge-BBT - iitanki zokugcina ibhiya, ityhubhu yoxinizelelo yoxinzelelo lweetanki zebhiya ethe tyaba ekhonza itanki ...
Itanki yeBhiya ethe tye
Amatanki ebhiya athe tye, abizwa ngokuba ziitanki zenkonzo, iitanki zesiselo esigqityiweyo, okanye iitanki zebhiya eziqaqambileyo zeBTT. Iitanki ezisebenzayo kunye nokufakwa kwe-PUR zipholile zisebenzisa amanzi okanye i-glycol ejikeleza ngaphakathi kwiiduplicators (amajelo okupholisa ngaphakathi kwebhatyi yentsimbi ephindiweyo).
Igama lemveliso: Vertical Bright Beer Tank BBT, Bright Beer Tanks, cylindrical pressure tanks, serving tanks, beer final conditioning tank, beer storage tanks - la ngamagama aqhelekileyo, kubandakanya iklasi enye yeenqanawa zoxinzelelo ezizodwa ezilungiselelwe ukulungiswa kwebhiya e-carbonated Phambi kwebhotile yayo, ukuzaliswa kweekhonkco okanye ezinye izikhongozeli. Ibhiya ecociweyo ecociweyo ityhilwa kwiitanki zebhiya okanye iitanki zecylindrically kwiitanki zokugcina ibhiya phantsi koxinzelelo ukuya kwi-3.0 bar ....
Udonga olunye Itanki yebhiya eqaqambileyo
Udonga olunye lwetanki eliqaqambileyo lebhiya luhlala lubekwa endlwini efrijini / kwigumbi elibandayo lokugcina ubushushu besiqhelo. Ke udonga olunye lwetanki eliqaqambileyo aludingi kunxibelelana neyunithi yolawulo kodwa luxhotyiswe ngegeji yoxinzelelo, ekulula ukuyisebenzisa. Ukuba unokuhamba ungasebenzi kwigumbi elibandayo, udonga olunye oluqaqambileyo itanki yobhiya iya kuba lukhetho olufanelekileyo kuwe.